Cameroon - Sudan (Video) - Ka dib markii dayrta ee Omar El Bashir, Sudan mari burhaantiisa ay u Cameroon: "Haddii Waxaa dhici kartaa in Sudan, Waxaa dhici karta in Camaron" - TELES Relay
ACCUEIL » COMPANY "Cameroon - Sudan (Video) - Ka dib markii dayrta ee Omar El Bashir, Sudan mari burhaantiisa ay u Cameroon:" Haddii Waxaa dhici kartaa in Sudan, Waxaa dhici karta in Camaron "
Ka dib markii ay dhacdey Omar Omar Bashir, Suudaani waxay u gudubtay Cameroon: "Hadday Sudan ka dhici karto, waxay ka dhici kartaa Camaroon"
Fiidiyowga naxdinta leh ayaa ku wareegsan shabakadaha bulshada. Suudaani waxay u dabaaldegtaa dayrta Omar Cismaan Bashir oo waydiiso Madaxweyne Paul Biya inuu is casilo.
Suudaan, dadku waxay soo galiyeen fiidiyoow ku saabsan internetka oo ay u dabaaldagayaan cayrinta madaxweynaha Cumar Al-Bechir oo horay u hoggaaminayey Sudan oo leh farsamo birta ah ilaa tan 30.
Dhaqanka calanka Sudan iyo heesaha heesaha, mudaaharaadayaashu waxay ku riyaaqayaan dhicitaankii Cumar Cismaan Bashir oo ku baaqay in Camerooni ay ku qabtaan kacaanka.
"Haddii taasi (kacaan) ay ka dhacdo Suudaan, waxay ku dhici kartaa Cameroon. Cameroon waa bartilmaameedka soo socda. Madaxweynaha Cameroon waa inuu is casilo, "ayuu ku dhawaaqay dibad baxayaasha fiidiyowgaan.
Madaxweynaha Suudaan Omar El Bechi ayaa la afgambiyay khamiistii 11 Abriil 2019 oo lagu soo rogay afgambi millatari ka dib markii uu dhacay kacdoon dad badan oo dhowr bilood ah. Shaacinta Khamiista ee dayrta Omar Cismaan Bashiir ayaa lagu salaamay farxad.
Mucaaradka ka soo horjeeda Suudaan waxay ahayd go'aankii Dawladda ee ku aadanaa qiimaha roodhiga ee 19 2018. Dalka oo dhan, kumanaan reer Suudaan ah ayaa ugu yeeray Omar al-Bashir. Madaxwaynaha ayaa isku dayay inuu ka hor istaago caqabadda xoogan, kadibna wuxuu soo bandhigay xaalad degdeg ah February 22.
Limbe: Xilliga xafladda FESTAC waa xafidanaa wasiirada iyo ciddii ka dambeysay